Dagaal Beleed ka socda duleedka degaanka Banyaaley ee gobolka Hiiraan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDagaal Beleed ka socda duleedka degaanka Banyaaley ee gobolka Hiiraan
Dagaal Beleed ka socda duleedka degaanka Banyaaley ee gobolka Hiiraan
Hiiraan Xog, Apr 9, 2018:- Dagaalo Beeled ka soo cusboonaday degaano hostage degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan,waxaana jiro qasaaro isgu jiro dhimasho iyo dhaawac.
Degaanka Banyaaley ee gobolka Hiiraan ayaa mararbadan ay ka dhaceen dagaal u dhaxeeyo laba Beel ee kala daga gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo kawada tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Dagaalka manta ka dhacay degaan ku dhaw degaanka Banyaaley ee gobolka Hiiraan ayaa la soo shegayaa in uu ka dhashay qasaaro isgu jiro dhimasho iyo dhaawac.
Dad ku sugan Magalooyinka Guraceel iyo Maxaas ayaa xaqiijiyay in la kenay dad ku soo dhawacmay dagaalada halkaas ka socda,waxaana la dhigay Isbitaalada ku yaalo halkaas.
Dad ku sugan degaanka Banyaaley ee gobolaka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalka markale dib u bilaawday maqribnimadii galabta,waxaana ay sheegeen in aay maqalayaan dhawaqa rasaasta oo aad u xoogan.
La soco waraka ku saabsan dagaalka ka socda duledka degaanka Banyaaley ee gobolka Hiiraan,
Gudoomiye Jawaari oo xaqiijiyay in uu is casilay